Faha-50 Taonan’ny Nidabohan’ireo Baomba Nokleary Amerikàna Tao Espaina · Global Voices teny Malagasy
Faha-50 Taonan'ny Nidabohan'ireo Baomba Nokleary Amerikàna Tao Espaina
Nandika (fr) i Emilie Frenois
Voadika ny 21 Febroary 2016 6:50 GMT
Fefy makarakara mamaritra ny faritra iray voaloto ao Palomares. Talohan'ny 2006, tsy voaràra ny fitsofohana tao amin'ilay faritra tena ahitàna taratra avo be, 40 taona taty aorian'ilay tranga. Dikasary tamin'ny fanadihadiana «Zava-miafin'i Palomares» an'ny TVE.
Ny 17 Janoary lasa teo, nankalazaina ny faha-50 taonan'ny tranga iray tsy dia be mpahalàla loatra any ivelan'i Espaina : ny fifandonana tamin'ireo fiaramanidina roa amerikana ka nampilatsaka tsy nahy ireo baomba nokleary niisa efatra tao Palomares, tanàna kely iray any atsimon'ny firenena.
Ny Janoary 1966, nisy B-52 iray nahadona ny fiaramanidina iray namatsy solika azy teny am-panidinana. Olona fito tao anatin'ilay fiaramanidina no maty ary baomba nokleary efatra Mark 28, milanja 1,5 méga taonina avy no nilatsaka tao Palomares : ny iray tany an-dranomasina ary ny telo hafa teny an-tanety, izay taminà kianja iray tao an-tanàna ny iray. Nipoaka ilay zava-mipoaka notateriny ary nanaparitaka ampahany tamin'ireo singa mandefa taratra avy tao aminy. Faritra mirefy 226 hektara no tratry ny rahona nisy taratra.
Tao anatin'ny ady mangatsiaka indrindra tamin'izany, ny laharam-pahamehana ho an'ireo amerikàna manampahefana dia ny hitady sy haka ireo baomba mba tsy ho tonga eny an-pelatanan'ireo “fahavalo”. Avy eo, nametraka ny toby Wilson ry zareo Amerikàna, teo amin'ny morontsirak'i Quitapellejos, izay nahavitan'ireo olona 6000 mahery nanàla ny taratra, nifototra indrindra indrindra tamin'ny fanesorana ny sosona ivelany tamin'ilay faritra tratry ny taratra. Tany efa ho 1000 m³ no nesorin-dry zareo tao ary nafindra ho any amin'ny toby Savannah River any Caroline Atsimo (Etazonia).
Raha ny momba ireo mponina tao amin'ny faritra indray, araka ny nambaran'ny Ecologistas en Acción (Mpiaro Tontolo iainana Amperinasa),
sady tsy nesorina no tsy nilazàna momba ny loza mitatao aminy ireo vahoaka, na teo aza ny fisian'ny taratra. Sady tsy nomena onitra, no tsy nilazàna ny amin'izay fepetra fisorohana tokony ho nataony.
Ao anatin'ilay lahatsary fanadihadiana Palomares Stuck Arrow an'ny Hispantv, tantarain'i Francisco Castejón, fizisiana momba ny nokleary sady mpikambana ao amin'ny Ecologistas en Acción, ny endrika hafa tamin'ilay hetsika :
Ny tena loza indrindra dia tsy ny rehetra no nodiovina, ary misy fatranà plutonium tsy azo tsinontsinoavina navela tao. Sarotra ny hanao vinavina, kanefa mety misy plutonium milanja 1 ‘livre’ miparitaka ao amin'ilay faritra. Plutonium betsaka izany.
Mihazakazaka manohitra antsika ny fotoana, satria arakaraky ny fandehan'ny fotoana no ivadihan'ny plutonium ho americium, izay mampitombo ny fahafahany mandefa taratra mandoto ny ety ivelany. (…) Mitatra mankany amin'ilay faritra voaloto ny rivotra, ny rano, ny asan'ny olombelona.
Somary nanamaivana ny lanjan'ilay tranga ny gazety tamin'izany fotoana izany, tamin'ny fanindriana mafy ny tsy fisian'ny loza ho an'ny mponina. Dikasary tamin'ilay fanadihadiana «Zava-miafin'i Palomares» an'ny TVE
Noho ny fanarahana maso henjana nataon'ny governemantan'i Franco, zara raha niresaka momba io tranga io ny gazety nasionaly tao Espaina. Saingy tsy vitany ny nanakana ny gazety any ivelany tsy hifantoka tamin'ny loza nokleary iray niseho tao amin'ireo morontsiraky ny firenena iray, izay lasa iray amin'ireo toerana ankafizina sy ironan'ny fizahantany eoropeana. Voatery noho ny tsindry iraisampirenena araka izany ny Minisitry ny Fizahantany tamin'ny fotoan'androny, Manuel Fraga, sy ny masoivohon'i Etazonia tao Espaina, Angier B. Duke, mba hilomano teo amin'ilay torampasik'i Palomares. Ilay fihetsiketsehana tsy matotra io dia natao mba hampisehoana tamin'ireo mpanao gazety maro tonga teo fa tsy misy loza na kely aza, na dia tsy mbola fantatra aza ny toerana tena nianjeran'ilay baomba tany an-dranomasina.
Tonga hatramin'ny fiheveràn'ireo amerikàna manampahefana fa hoe vintana ho an'ireo mponina ao amin'io faritra io ny zavamitranga, raha tsaraina amin'ny zavatra nolazain'ny masoivoho Duke:
«Tsy fantatra ireny olona ireny tamin'izany, ary ankehitriny, malaza eran-tany ry zareo (…) Azo eritreretina hoe navelantsika hiditra amin'ny vanim-potoanantsika ry zareo».
Na izany aza, ny olona ao Palomares, mpamboly ny ankamaroany, tsy dia faly loatra nahazo fahalinana tahaka izany . Ana Márquez, mbola zaza fony niseho ny loza, mitantara amin'ny Hispantv:
Namoy ny zavatra rehetra, ohatra, ny ray aman-dreniko : ny vokatra tamin'iny taona iny sy ireo taona nanaraka (…) tsy nividy ny vokatra ao aty Palomares ny olona»
Roa amin'ireo baomba tao Palomares no hita ao amin'ny National Atomic Museum de Albuquerque (Nuevo México) – Tranombakoka Nasionaly momba ny Nokleary. Sary an'i Kelly Michals tao amin'ny Flickr, lisansa CC BY-NC 2.0
Taorian'ny asa fanadiovana, niaraka nanasonia fifanarahana roa ireo manampahefana, amerikàna sy espaniola : ny Otero-Hall, tetikasa siantifika handinika ny fiantraikan'ny taratra any amin'ny faritra iray ambanivohitra sy ny tetikasa Indalo, hanaraka akaiky ireo mponina amin'ny faritra niharany, ary hatramin'ireo biby sy zavamaniry natao ho fihinan'ny olona. Voatazona hatramin'ny 2009 ity tetikasa farany ity, ary nafenina ny vokany. Araka ny lahatsoratra iray nosoratan'i Lee Ferran ho an'ny tranonkala ABC News,
A 2006 State Department cable published by the anti-secrecy website WikiLeaks says that the U.S. had spent about $300,000 every year — totaling around $12 million up to that point — to fund the Spanish government’s monitoring of the area and “track the health of local inhabitants.”
Antontan-kevitra tamin'ny 2006 avy amin'ny Departemantam-panjakana, nivoaka tao amin'ny tranonkalam-pitsirihana WikiLeaks no namboraka fa nandany 300.000 dolara amerikana isantaona i Etazonia – mitontaly 12 tapitrisa hatramin'izao – mba hamatsiana ny governemanta Espaniola, hahafan'ity farany manaraka akaiky ilay faritra sy manao « fanarahana maso ara-pahasalamana ny vahoaka ao an-toerana».
Amin'ireo tetikasa ireo, nosoratan'ilay mpanoratra Miguel Madueño, « na tsy te-hiditra amin'ny teorian'ny firaisana tsikombakomba aza», ireo antony mety nanosika ireo amerikàna manampahefana hanao asa fanadiovana tsy zarizary toy izany :
Raha mbola tsy afaka nampiasa ny vola sy ny fitaovana hamitàna an-tsakany sy andavany ilay fanadiovana ry zareo, mba vitany ihany ny nanao fanadihadiana momba ny fiantraikan'ilay fandotoana vokatry ny taratra. Loza tsy nahy no nisy, saingy sambany tamin'io no nahafahana niditra taminà laboratoara iray fanandramana, izay afaka nakàna ny angon-drakitra momba ny vokatra ratsy tsy niriana nateraky ny taratra tamin'ny olombelona, ny voly, ny biby fiompy, ny tany : raha fehezina dia ny sehatra rehetra.
Ankehitriny, i Palomares no faritra iray tena manana taha avo indrindra amin'ny resaka taratra any amin'ny Saikinosy Iberika. Na ohatra aza hoe, araka ny fandalinana, tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamàn'ny mponina ao aminy io toedraharaha io, efa fangatahana tranainy be ilay fitakiana hanadiovana ny taratra ao aminì'ilay faritra. Araka ny El Confidencial, ireo governemanta espaniola nifandimby teo dia samy nifampiraharaha tamin'i Etazonia avokoa nandritry 10 taona. Nitondra vokatra ireny fifampiraharahàna ireny ny 19 Oktobra 2015, tamin'ny fanaovana sonia ny fifanarahana iray teo amin'ny sekreteram-panjakàna amerikàna, John Kerry, sy ny minisitra espaniola misahana ny Raharaha Ivelany, García-Margallo, mba « handraisan'i Etazonia ny andraikiny » sy hirotsahany amin'ny fifampiraharahana hanaovana fifanarahana manery ny hanadiovana an'i Palomares. Na izany aza, « samy tsy mbola misy voafaritra izay antsipirihany amin'ny asa fanadiovana hatao sy ny loharanom-bola ho amin'izany ».
3 herinandro izayNorvezy